लिम्वूवान - विविध सामग्री: भगत सुब्बा
भिडियो वार्ता / म्युजिक भिडियो / समाचार / तस्विरहरु हेर्न क्लिक गर्नुहोस् ।
२०१० पुष २१ मा जन्मनु भएका भगत सुब्बा बढी लिम्वूवानमा लाजेसा याक्थुङबा उपनामले चिनिनु हुन्छ । वहा बढी गीत,कविता,समसामयिक लेख,समाजशास्त्र लेखनमा आफुलाई प्रस्तुत गर्नुहुन्छ । हाल सम्म नेपाली तथा लिम्वुभाषाकोगीत २५० जति लेखी सक्नु भएको छ भने ८० गीतमा संगीत पनि गरीसक्नु भएको छ । वहाले याक्थुड.साम्लो भाग १-५ / दुइवटा संकलन / तिनवटा आफ्नै आवाजमा साथै हालसालै लिम्वूवान भाग १र २ प्रकाशित गर्नुभएकोछ । किरात धर्म तथा साहित्य उत्थान संघ काठमाडौ उपत्यका समिति सचिव - १वर्ष / किरात याक्थुड. चुम्लुड.,नेपाल केन्द्रिय संस्थापक - पार्षद,किरात याक्थुड. चुम्लुड.,नेपाल केन्द्रिय संस्थापक निर्वाचन मण्डल - अध्यक्ष,प्रजातान्त्रिक संघीय लिम्वुवान नेपाल - संयोजक,हात्तीवन मांहीम ललितपुर - आजीवन सदस्य,किरात याक्थुड. चुम्लुड.,नेपाल केन्द्रिय समिति संस्कृति विभाग - प्रमुख को रुपमा संलग्न हुनुहुन्छ । र किरात याक्थुड. चुम्लुड. काठमाडौशाखा प्रतिभा सम्मानबाट सम्मानित भैसक्नु भएका लिम्वूभाषाका प्रथम गायक लाजेसा याक्थुङबासंग लिम्वूवान डट ब्लगस्पोट डटकमका ब्लगर टंक सम्वाहाम्फेले गर्नु भएको कुराकानीको अंश पाठकहरुको लागि प्रस्तुत गरीएको छ ।
१ निक्कै लामो समय पछि तपाईले हङकङ मै वसेर पनि लिम्वूवान भाग १,२ नामक लिम्वूभाषाको गीतिसंग्रह हालसालै स्रोताहरुको माझ ल्याउनु भएको छ । संग्रहको नाम लिम्वूवान नै राख्नुको कारण के होला ? यसमा कस्ता खाले र कति गीतहरु संग्रह गर्नु भएको छ होला ?
यसपालिको याक्थुङ्ग साम्लो भाग ६ र ७ को नाम , लिम्बुवान एक र दुइ सिडि र औडियो चक्का दुबैमा निकालिएको लिम्बु भाषाको सिडि उत्पादनमा यो नै पहिलो शुरुआत हो । लिम्बुवान नै नाम राख्नुको काराणबारे चाही ,२०४७ सालको प्रजातन्त्रको पुनरबहाली अगाडिको लिम्बुवान भनेको दरबारीया दलाल र सामान्ती जाली फटाहाहरुको सदुपयोगको साधन अर्थात माननीय मन्त्री भजांइखाने एउटा निजी स्रोतजस्तो मात्र थो । तर बर्तमानको लिम्बुवान भनेको सबै लिम्बुवानी जनताहरुको साझा भूमि अर्थात लिम्बुवान राज्यमा बसोबास गरिआएका सम्पुर्ण जातजातिहरुको अभिभावकत्वको अभिभारा निभाउंदै आएकी लिम्बुवान आमाकै स्वारुप हो भन्ने कुरो सार्बजनिक भइसकेको छ । अबको लिम्बुवान भनेको सबै लिम्बुवानी जनताहरुको आमा हो भनेर बुझ्नु पर्ने हुन्छ । अत यो धर्तिमा आमा भन्दा अर्को ममतामयी शब्द नै नपाइने हुनाले आफनो गीति संगालोको नाम पनि लिम्बुवान आमाकै नाममा राखिएको हो ।
जस्मा लिम्बुवान एक भाग ६ को सिडिमा १० वटा र लिम्बुवान दुइ भाग ७ को सिडिमा भने ११ वटा गरी जम्मा २१ वटा गीतहरु छन । गीतहरुको प्रकृती बारे , ९० प्रतिशत लिम्बुवानबादी भन्नाले राष्ट्रिय गीतहरु समाबेश छन भन्नै पर्दा न्याप्टो नाक र चिम्सो आंखा भाका बाहुनका दतक्कपुत्रहरुले जाबरजस्ती मिच्न खोजेको लिम्बुवानी आमाको माङ्ग युक्नाको चारै सूर बांधेर सिलाम साक्नु ताप्थेक्मा गरिएका बेजोडका भुगोलबादी रचनाहरुमा संगीत भरेर आवाजहरुद्धारा प्राण भरिएका जिंउंदा लिम्बुवानी गीतहरुको उपस्थिति छ । अलबुम लिम्बुवान एक र दुइमा ।
२ तपाई हालसालै नेपाल जादा पक्कै पनि लिम्वूवानका नेता कार्यकर्ता संग भेटघाट गर्नु नै भयो होला उनीहरुले लिम्वूवान स्वायत राज्य पुन प्राप्तिको आन्दोलनलाई कसरी अगाडी वढाइ रहेकाछन् ? कतिको सकारात्मक ढङ्गले वढी रहेछन् जस्तो लाग्छ ?
हेर्नोस । राजनैतिक समुह भनेपछी । सत्तावालहरुको भत्तावालहरु एक न एक ठाउंबाट घुसेकै हुन्छन । हेर्दा न्याप्टो छ । आफन्तै हो कि जस्तो । तर चुच्चेभन्दा निक्कै खतरनाक हुन्छन । ति घुसपैठियाहरु । लिम्बुवानबादी संगठनहरुमा यो एउटा जटील समस्याको रुप बन्दै जांदो छ । तर लिम्बुवानको शाझा सवालको हकमा भन्नु पर्दा । आजसम्मको आन्दोलनहरुको नतिजाले देखाएको तथ्याङकमा सत्प्रतिशत सकारात्मक्ता पाइएको छ । घुसपैठियाहरु ओझेलमै छन । भेटघाटको बारेमा , कुमार लिङ्गदेन , सन्जु पालुङ्गवा , डिके बुद्धिष्ट , र वहांहरुको केन्द्रिय सदस्यहरुसग संघीय गणतन्त्र , जातीय समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र क्षेत्रीय स्वायेतता चाहने राज्यहरुको इतिहास भूगोल र प्रान्तीय आकार प्रकारको संरचनाहरुबारे समेत अनौपचारीक छलफल भएको छ । र मावोबादी पक्षधर लिम्बुवानबादीहरुसंग कार्यगत एकताको कुरो भएको थो । लिम्बुवानको चिफ अफ एक्ज्युकेटिभको नियुक्तिमा माओवादीपक्षबाट चुच्चेको नियुक्तिबारे मैले बिरोध गर्दा , ति माओवादी लिम्बु भाइहरु मेरो सामु खुलेर बोल्नु चाहनु भएन ।
३ तपाई मुलत गायक तथा लेखक भएर पनि विगतमा प्रजातान्त्रिक संघीय लिम्वूवान भन्ने पार्टी नै खोलेर लिम्वूवानको लागि होमीनु भएको थियो हाल यो पार्टी कुन रुपमा चलिरहेको छ ? कलाकर्मी भएर पनि राजनिती तिर किन लाग्नु भएको होला ?
क) गायक तथा लेखक र अन्य कलाकारहरु राजनितिक पार्टी संगठनका उर्जामात्र नभएर नेतृत्वपङतीका अगुवा पनि हुन सक्छन भन्ने एउटा उदाहारण हो । संघीय लिम्बुवान पार्टीको निर्माण इतिहास ।
ख) पार्टीको अवस्था कस्तो छ ।
हालमा प्रजातान्त्रिक संघीय लिम्बुवान पार्टी केवल एउटा राजनितिक पार्टी कै रुपमामात्र सिमित छ । ससक्त संगठनात्मक शक्तीको रुपमा भने अउन सकिरहेको छैन । यथार्थतालाई स्वीकार्नु पर्छ । साथीहरु कोशिश गरिरहनु भएको छ । तर हालको परिस्थिति भनेको संगठनको निर्माणमा जोड भन्दा पनि लिम्बुवान प्रप्तीको शाझा सवालमा कार्यगतएकताको आवश्येकता बढीनै खडकिएको बिषय छ । त्यसकाराण पहिला हामी एउटा खेल मैदानको निर्माण गरौं । त्यसपछीमात्र खेलाडीहरु जन्माउनु पर्ने हुन्छ । जुन समय र परिस्थितिले तय गर्दै लानेछ ।
ग) कलाकर्मी भएर पनि राजनितिमा किन लागेको भन्ने बारे ।
उ बेला सबै इत्तर पार्टीहरु प्रतिबन्धीतको अवस्था थो । ऐन मौकामा पंचे नपंचे सबैले मेरो लिम्बुवानलाई नारायणहिटि दरवारको कोशेली बनाएर अंचलाधीश , माननीय मंत्री आदिको ओहोदाको प्रमाण पत्र सित भजांउने काममात्र गरे । त्यस्तो बिकृति र बिसंगतिलाई रोक्नुपर्छ भन्ने मेरो मनमा एक सोंचको बिकास भयो । त्यसको लागी राजनैतिक संगठनको आवश्येकता थियो । र संघीया लिम्बुवान को जन्म भयो । तर पार्टीले गतिलिन भने बांकी नै थो । शायद अब त्यो कामको थालनी हुन्छ ।
४ लिम्वूवानवासी लिम्वूहरु र लिम्वूवानका विभिन्न पार्टीहरु सवै लिम्वूवान भनेर कुर्ली राखेका छन् तर नया संघीय गणतन्त्रीक नेपालका सत्ताधारी नेताहरुले भने कुनै वास्ता नै गरी रहेका छैनन् अव माथि सम्म हल्लिने आन्दोलन लिम्वूहरु तथा लिम्वूवान पार्टीहरुले गर्न आवश्यक छैन ?
एकदमै आवश्यकता छ । ६२ , ६३ बर्षपहिलेको भारत छोडो आन्दोलन , महान चिनीया कम्युनिस्ट पार्टीको शशक्त राजनितिक क्रन्ति , अनि १८रौं शताब्दीको इङ्गलेण्डको राजनैतिक घर्सनको अवस्थामा छ । अहिलेको नेपालको राजनितिक परिस्थिति । मत्लव के हो भने । भारती र चिनाहरु हामी भन्दा ७० बर्षे अगाडी छन । राजनितिक सवालमा । त्यस्तै बेलायतीहरु हामी भन्दा २०० बर्षे अगाडी छन । हरेक संस्कारहरुको सभयताहरुको संसकृतिहरुमा । त्यस्तै नेपालको राजनितिक संस्कार र सभ्यताको संसकृतिलाई हेर्ने हो भने आदिबासी नेप्टेहरुमाथी तागाधारी हिन्दु धर्मी चुच्चे नाक भाकाहरुले २४० बर्ष देखि लगातार एकलौटी शाषन गर्दै आइरहेको दुर्भाग्यपुर्ण इतिहास छ । भन्नुको तात्पर्य । चुच्चेहरु भन्नाले क्षेत्री बाहुनहरु हामी बुच्चे नाक भाका लिम्बुहरु भन्दा २४० कदम अर्थात बर्षले अगाडी छन । जस्तै २५ बर्षो तन्देरीले ८ बर्षो फुच्चे सित के को डराउंछ र । उफ्रेर जोर लात्ती हान्दा पनि वास्ता गर्दैन । तर अर्को २५ बर्षपछिको भने परिस्थिति अर्कैबन्ने छ । आत्तिने काम छैन । समय लाग्छ । तर नेप्टेहरुको राजनितिक संगलग्नतामा भने निरन्तरताको सारै खांचो छ । तपाईको नया संघीय गणतान्त्रिक नेपालका सत्ताधारी नेताहरु भनेका तिनै जातियहैकमवादी जनाइधारी चुच्चे नाक भाका क्षेत्री र बाहुनहरुनै त हुन नी । जुनसुकै खेमा र कित्ताका नै किन नहुन र । निर्णयक ठाउंमा शतप्रतिशत अझै सम्म यिनीहरुकै हालीमुहाली छ । तर सबै चुच्चेहरु बाहुनबादी नहुन पनि सक्छन ।
५ लिम्वूवानको लागि भनेर पार्टी मात्रै धेरै जन्मेका छन् तर कार्यगत एकता भने त्यति देखिदैन यसरी तल नै एक अर्कामा खिचलो गर्दा लिम्वूवानको आन्दोलन तुहिने त होईन ? एउटै उदेश्यको लागि यति धेरै पार्टीहरु खोलिनु सकारात्मक ठान्नु हुन्छ ?
तपाइको संकेत एउटै संघीय लिम्बुवान पार्टी फुटेर , लिङ्गदेन लिम्बुवान र पालुङ्गवा लिम्बुवानको घोषणातर्फहो क्यारे । यी पार्टीहरु शुरुको अवस्थामै बेग्लाबेग्लै भएर आउनु पर्ने थो । अझैं ढिलोगरी फुटयो । नफुटेको भए शायद लिम्बुानै डुब्थ्यो । तर अबको लिम्बुवानलाई त्यस्तो खत्तरा रहेन । किनकी मक्किएको हांगा र सडिएको बिजनमात्र तुहिएर कुहिएर जान्छ । त्यस्ले मूल अङगलाई त्यस्तो खासै असर पार्दैन । किनभने त्यो भनेको एउटा राजनैतिक संस्कारको नियमित प्रकृया पनि हो । आत्तिने काम छैन । जे भयो राम्रै भयो , भन्ने पक्षमा जानु पर्छ ।
दोस्रोमा रहयो कार्यगत एकताको कुरो ,
कार्यगत एकताको सवालमा हो भने , मेची देखी महाकाली सम्मका सबै मधेसे , पाहाडे , आदिबासी , भूमिपुत्रहरु र हिन्दु धर्म शाषनसत्ताले पशुभन्दा नीच ब्यवहारगरी किचिपिची पारेर जिउंदै नर्कको जीवन यापन गर्न बाध्य बनाई थिचिराखेको । बाहुनहरुको ब्रहम्माअस्त्र मनु स्मृतीको राज्यबिधानले । मानबीय हक अधिकारबाटै प्रतिबन्धीत बिभिन्न तह र तप्काका सम्पुर्ण दलित जातिहरुसमेतको कार्यगत एकताको आवश्येकता छ । त्यसकाराण यसबारेको राजनैतिक संगठनहरुको बिस्तारमा बढीसेबढी जोड दिने बेला हो । यो मौका भनेको । लिम्बु लिम्बुहरुको एकताको सवाल भनेको निजी , घरायसी र अन्तारिक समस्या हो । जुन सधै रहिरहने गर्दछ । नत्र तुत्तु तुम्म्याङ्गहरुको अर्थै रहदैन ।
लिम्बुवान भनेको बि.सं.१८३१ अगाडिको एक स्वतन्त्र अधिराज्य हो । राष्ट्र हो । सिङगै एउटा देश हो । जहां तराइ पहाड हिमाल र अमृत बर्साउने नदिनालाहरुसमेत मिलेर बनेको उर्बरायोग्य एउटा अतिनै सुन्दर हिमाली राज्य थियो । त्यसैले त गण्डक र कर्णाली प्रदेश भन्दा पश्विम कुमांउ गडवालसम्मका मान्छेहरुको लिम्बुवानमा बर्साई साराई भयो । त्यसैले त खगेन्द्र संग्रौल, डा. ताना शर्मा , अम्बर गुरुङ्ग , डा.नोबल कुमार राई , इन्द्र बहादुर र्राई , ताम्बा काइतेनका संकलक सान्तबीर तामाङ्ग , गोपाल योन्जन , कर्म योन्जन , दिब्य खालिङ्ग ,डा. नबिन कुमार राई , डा. नबिनचन्द्र राई , अरुना लामा , र हाल चर्चामा आउंदै गरेका डा. गोबिन्द भटराई , कष्ण धराबासी , र मेरा गाउले अभी सुबेढी जस्ता स्रष्टाहरुको यो सुन्दर लिम्बुवानभूमिमै जन्म भयो । अरु पनि थुप्रै हुनुहुन्छ । यो छोटो अन्तवार्ताको पानामा अटाउनै सकिन्दैन । जजस्ले लिम्बुवानको भुगोलमा सुन्दर इतिहासको निर्माण गरेर जानु भो र बांकी थुप्रै निर्माणधीनमा हुनुहुन्छ । जुन थलोलाई माङ्ग साम्माङ्गको देश भनेर चिनिन्छ । त्यस्तो बिशालभूमिमा दुइ चारमात्र राजनितिक पार्टी भए भने त के मजा आयो र । प्रजातान्त्रिक , लोकतान्त्रिक , संघीय गणतान्त्रिक राजनितिक अभ्यासमा जानलाई जति धेरै पार्टी भो उत्तिनै बढी प्रतिस्पर्धाको आवश्यकता पर्दछ । र त्यो कडा प्रतिस्पर्धाले कार्यकर्ता र संगठनको परिमार्जन गर्ने कामको पुर्ताल गर्नेछ । राज्यप्रति असल अवधारणा लिएर पार्टी खोल्नुलाई नकारात्मक मानिन्दैन । र त्यो समयको माग पनि हो ।
६ सरकारले एक पटक भन्दा वढी वार्ताको टेवुलमा लिम्वूवानका नेता कार्यकर्तालाई वोलाएन अव पुन वार्ताको लागि कुनै सम्भावना पनि देखिदैन के अव तल मात्रै कराएर वस्ने हो कि वार्ताको लागि पहल गर्ने ? दवावमूलक कार्यक्रम पनि लिम्वूवान पार्टीले गर्न सकेका छैनन् के सेलाउन लागेका त होईनन् ?
क) कहां सेलाउनु । क्षेत्रीयताबादी पार्टीहरु त भरखरै मात्र जन्मदै छन । हो जेठो संस्थाको रुपमाचाहीं लिम्बुवान नै हो । लिम्बुवान त भरखरै मात्र तात्तिंदैछ । हो फलाम तात्तिनलाई समय लाग्छ । तर तत्तिसकेपछी त्यसलाई निभाउन फेरी समुन्द्रै चाहिन्छ । राजनितिक पार्टी र सरकारको वार्ता भनेको समय परिस्थिति र आन्दोलनहरुको आकारबाट जन्मिने हो र त्यस्को तापक्रमहरुले तय हुने आपत्तकालीन परिस्थितिको उपज हो । त्यो वातावरण बन्नको निम्ती सबै जातजातिहरु आफनो राजनैतिक हक आधिकारको ग्यारेण्टिको खातिर आफैं आन्दोलित हुन आवश्यक छ । ब्यवस्थापनपक्षका योजनाकारहरुले त्यो वातावरण तयार पार्ने खाकाहरु कोर्न सक्नु पर्छ ।
ख) अब तलैमात्र कोटयाएर के हुन्छ भन्ने सवालमा ,
कोटयाउने ठांउनै तलै हो । जहां जनताहरुको आवादी छ । जहां उनीहरुको बर्वादी भइरहेछ । जहांका जनताहरुमा अभावैअभावको जिन्दगी छ । ज्ञानबुद्धिको खडेरी लाग्या छ । प्रशिक्षणहरुको अभाव छ । अनिकाल छ । भोकले पुरै गाउंबस्तीहरुमा हाहाकार मच्चीरहेछ । लुटपाट भइरहेछ । शान्तिशुरक्षाको नाममा सरकारी दमन्चक्रले ताण्डवनृत्य मच्चाइरहेछ । बाहुनहरुले नेप्टेहरुको गिदीमा बिष भरेर आफैंआफैंमा फुटाइरहेछ । लिम्बु र र्राईहरुकोभिषण युद्धको तयारीमा ऐतिहांशिक लिम्बुवान भूमिको संखुवा सभा , धनकुटा , र सुनसरी जिल्लाहरुमा धमाधम बङकर र ट्रेन्चहरु खनाउदैछन । अहो । करुतो अशुभ सामाचार । हजारौं बर्ष देखि बंशजभित्रका एकाआतका मित्र लिम्बु र राइहरुको बिचमा युद्ध थोपर्ने षड्यन्त्रात्क योजनाको तानाबाना बुनिरहेको बाहुनहरुको सोचाई कत्ति भयानक होला । लिम्बुवानको दक्षिणी भूभाग झापा , मोरङ्ग र सुनसरीलाइृ कोचिलाका भरतीय बंगलाबन्धुहरुलाई बोलाएर जिम्म दिनु पर्छ । किनभने २०० बर्ष जति पहिले मेची नदीमा बंगालीहरु माछामार्न आका हुन । त्यसैले लिम्बुवानको उर्बरायोग्य समथल मैदानी भागमा बंगालीहरुको हक लाग्छ । भनेर संगठन बनाउन सघाउने चुच्चे बाहुनहरुले यो पनि सोच्नु पर्दछ कि लिम्बुहरुले उनीहरुको के बिगारेका थिए । र कथङकाल लिम्बुवानको राजमार्ग दक्षिणी भाग चुडिंएर गयो भने पनि त्यसबाट बाहुनजीहरुलाई फायदा के हुन्छ -
लिम्बुवानको जस्तो शुरक्षित निस्चित इतिहांश र भूगोललाई समेत केरकारगरी च्यात्च्युत्त पार्न षडयन्त्रकारी बाहुनहरुका दलाल न्याप्टे चिम्से ब्राह्मण दतक्कहरु अहोरात्र खटिराका छन । यो सबै तलैका कुरा हुन । जहा तपाई हाम्रो इतिहासको थाक र भूगोलको बास स्थान छ ।
सुनसरी बराहक्षेत्रलाई लिम्बुवानको नक्शाबाट झिक्न सकिस भने त्यहिंका बडाहाकिम खालास भनेका होलान , कलमी लेखान्दश भूमि साङपाङ्गलाई । त्यसैले कलमको खन्ती र बाहुनको जन्ती लिएर लिम्बुवानको एउटा ठुलो ढुङगाको एका छेउबाट खन्न थालेकाछन । शायद दतक्कलाई बिधायक र संसदको आश्वासन पनि होला ।
सम्पादक टंक सङबाहाङ्गफे ज्यु यी पनि तलैका कुरा हुन । लिम्बुवान आमाको चोक्टा लुछने दाउमा सैंयौ भूमिहरु निर्देशननुसारको कार्यमा जुटीरहेका होलान । एक पन्ना लेखे बापत् बिसौं हजार परिश्रमिक लिएर धरान रांगाचोकमा तङबा तान्दै लिम्बुवानका सबै आधार प्रमाणहरु नक्कली हो भन्दै तङबे स्रोताहरुमाझ भयङकरको डिङ्ग हाकिराका होलान । तपाई हामीले आफन्त सम्झेका भूमिहरुले । हेेर्नोस न । येतिका धेरै समस्याहरु सबै तलैछन । चटक्कै छोडेर माथी जान धेरै अप्ठयारो छ । ब्राहम्माणदतक्कपुत्रहरुबाट लिम्बुवानको नक्शा च्यात्ने कुरोको चर्चा धेरै माथिमाथीसम्म उडीसक्यो । लिम्बुवानका धर्तिपुत्र याक्खा , याम्फु , लहरुङ्ग , मेवाहाङ्ग , थारु , धिमाल , आथाप्प्रे , मदेम्बा र याक्थुम्बाहरुलाइ हेउ बिनाका नपुङसकलाईझैं हेपेर लेख्न थाले । बोल्न थाले । लिम्बुवानका सबै सर्जकहरुको यसबारेमा म ध्यानाकार्शन गराउन चाहन्छु । र कलमी लेखान्दाश भूमि जीहरुलाई पनि यस्तो गलत लेख रचनाहरुको सम्पे्रषण गरेर राइ र लिम्बुहरुको बिचमा झगडा गर्राई हिन्दु बाहुनहरुको दुर्भावनालाई टेवा दिने काम नगरीदिनु हुन म यसै अन्तरवार्ताको माध्यमबाट बिनम्र निबेदन गर्दछु ।
७ लिम्वूवान स्वायत राज्य पुन प्राप्ति शान्तिपूर्ण ढङ्गले हुन्छ जस्तो लाग्छ ? शान्तिपूर्ण ढङ्गले प्राप्ति भएन भने हिंसात्मक गतिविधी अपनाउनु लाई ठिक ठहर्याउनु हुन्छ - लिम्वूवान स्वायत राज्य पुन प्राप्ति हुन्छ भन्ने कुरामा कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
जहां सम्म मलाई लाग्छ । लिम्बुवानमा हिङशापूर्ण आन्दोलनको आवश्यकता पर्दैन । किनभने लिम्बुवानी जनताहरु सधैं शान्तिको पक्षधर भएर आइरहेका छन । कथाङकाल शशस्त्रताको आवश्येकता परिहाल्यो भने पनि त्यसको निर्णय लिम्बुवान एकलैलेमात्र नभएर मेची देखि महाकाली सम्मका आदिबासी , मधेसे र दलितहरुको राजनितिक महासंघको संयुक्त निर्णयबाटमात्र हुनेछ । नत्र क्षेत्रीयताबादी राजनितिक पार्टीका विद्यार्थीहरुलाई धोखा हुनेछ । तर अब उसोको हकमा हो भने हिङशाको खेल समाप्त भइसको भन्दा पनि हुन्छ । त्यसैले अब लिम्बुवान स्वयेतता प्राप्तिको खातिर सबै लिम्बुवानबासीहरु एक भएर भावनात्मक हिसावले शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा जुटने बेला आको छ ।
दोस्रोमा आएर , हिङसात्मक गतिबिधि अप्नाउनु कतिको उचित हुन्छ भन्ने बारेमा , म के भन्छु भने । लिम्बुवानले गर्ने आन्दोलननै शान्तिपुर्ण हो । किनभने लिम्बुवान सरकार र गोर्खा -नेपाल) सरकारबिचको १८३१ को द्धिपक्षीय सन्धी सम्झौतानै आफैंमा सबै भन्दा ठुलो हतियार हो । त्यो सन्धीपत्रको महत्वलाई राम्ररी बुझने हो भने , दश हजार एटम बम भन्दा बढी शक्तिशाली हतियार हो त्यो । लिम्बुवानको सवालमा त्यस्तो शक्तिशाली इस्तिहारी अश्त्र छंदाछंदै , फलामे बन्दुकको के काम र । हुन त लिम्बुवानी सरोकार भन्दा फरक मत राख्ने भूमि साङपाङ्गजीले । ति सबै नक्कली रसीदमात्र हुन भन्ने आशयको बिलौना पोख्नु भाको रहेछ । धन्यवाद भूमिजीलाई । तर लिम्बुवानको सवाल भनेको लिम्बुवानबासीहरुको सरोकारको बिषय हो । जसमा राजनितिमात्र नभएर इतिहाश र भूगोलको सिमारेखा पनि कोरिएको हुन्छ भन्ने कुरो शायद बुझाइरहनु परोइन भन्ठान्छु ।
अब तेस्रोमा गएर , स्वायेतता प्राप्ति हुन्छ भन्ने बिषयमा कतिको बिश्वाश राख्नुहुन्छ भन्ने बारेको सवालमा । तिन उदाहरणहरु पेश गर्न चाहन्छु ।
क) लिम्बुवान स्वायतता प्राप्त हुन्छ भन्ने सवालमा म १०० सतप्रतिशात आशावादी छु । किनभने जनताका जानी दुश्मन वीर मशानको औतारी महाराजको अब धरायसी भइसको ।
ख) त्यस्तै प्रजातान्त्रिक र लोकतान्त्रिक संघीय राष्ट्र नेपाल भनेर घोषणा भई टांचा समेत लागिसको ।
ग) मा आएर सात दलको सरकार र सदनको बहुमत समेतले संघीय गणतान्त्रिक राष्ट्र नेपाल भो भनेर अनमोदन गरीसको । अर्को तर्फ जातीय हैकमवादी , अतिबादी हिन्दु चुच्चे ब्राम्हणबादीहरुको समुहबाट समेत बहुचर्चित मुर्धन्य नेता डा. बाबुराम भट्टराई र नेकपा मावोवादीका सुप्रिम कमाण्डर प्रचण्ड जस्तै थुप्रै चुच्चेहरुले आदिबासी बुच्चेहरुसंगै मिलेर आधुनिक नेपालको निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने नौलो एवं परीमार्जित जनवादी बिचारधारालाई मूल मन्त्रको रुपमा अघि सारीरहनु भएको छ । र जातीय समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको पक्षमा सिंगै माओवादी पार्टी खडा भईरहेको अवस्था छ । जुन हामी क्षेत्रीयतावादी सोंच राख्ने आदिबासीहरुको सवालमा माओवादीको यो कदम ज्यादैनै स्वागतयोग्य भएको बखत हो । यो अवसर भनेको । बन्दुक र गोलिगठ्ठा बाहेकको साङगठानिक शक्तिको हिसावले हेर्दा । यो तरल परिस्थितिको बिशेष अम्बल दर्जाको पार्टी हो नेकपा माओबादी भनेको । जस्ले २४० बर्षको इतिहास बोकेको अतिबादी निरंकुश अत्याचारी हिन्दु राजाको दरवारिया शक्तिलाई समाप्त पारी , नेपाली राजनितिक मैदानमा आमुल परिवर्तनको वातारवण तयार पार्न सफल भएको छ । म बाबुराम र प्रचण्डको मान्छे होइन । तटस्थ लिम्बुवानवादी एक स्वतन्त्र योद्दा हुं । चिन्तक हुं । सत्यलाई छोप्नु हुन्न , र असत्यलाई पोस्नु हुन्न भन्ने मान्यता बोक्ने ब्यक्ति हुं । यस्तो ठुलो राजनैतिक शक्ति अहिले हामी क्षेत्रीयताबादीहरुको पक्षमा छ । शोषित पीडीत जनताहरुको पक्षमा छ । त्यसैले म त भन्छु । लिम्बुवानमा लिम्बुवान सरकार त आई सको । त्यसको केही प्राबिधिक प्रावधान र प्रकृयाहरुमात्र मिलाउन बांकी छ । बांकी तपसिलका बाधा बिरोध र अडचनहरु भनेका हाम्रा आन्तरिक मामिलाहरु हुन । जस्को निदान बिस्तारै भएनी हुन्छ ।
८ लिम्वूभाषाको गायन क्षेत्रमा तपाई आदि गायककोरुपमा तपाईलाई हेरीने गरीन्छ त्यसैले यो क्षेत्रमा कसरी प्रथम रुपले गायनमा प्रवेश हुन उत्प्रेरीत हुनु भयो ? कसैको सल्लाह वा प्रभावले लाग्नु भएको हो कि ? आउदा लिम्वूभाषी गायक गायिका तथा संगीतकर्मीहरुलाई कस्तो सुझाव दिन चाहानु हुन्छ ? लिम्वूभाषाको गीतसंगीत क्षेत्रको भविष्य कस्तो देख्नु हुन्छ ?
क) प्रागीक ब्याख्यनुसार नाच्न , गाउन र बजाउन जान्नेहरुलाई कलाकार भनिन्छ । मेरो जमानामा सबै लिम्बु र लिम्बुनीहरु धान नाच्न पालाम गाउन र च्याब्रुङ्ग बजाउन जान्ने थिए । उक्त ब्याख्याको आधारमा हेर्दा । साङ्गगीतिक भाषानुसारले हो भने त सिङ्गै लिम्बुवान भूमि नै कलाकारहरुको देश रहेछ भन्ने बुझाउंदछ । मेरा बाउ इन्द्रराज लिम्बु माइला दाजु राजेन्द्र फेदापहाङ्ग हाक्पारे गाउनमा माहीर हुनुहुन्थ्यो । वहाहरुको मिठो स्वर र रसिलो छन्दहरु सुनेर म संगीतमा प्रभावित भएर आज यहांसम्म आईपुगें । त्यसरी मेरा गुरु भनेका वहाहरु नै हुन हुन्छ ।
ख)आदि गायकको सम्बोधन गरि सम्मान दिनु भएकोमा पत्रकार टंक सम्बाहाङ्गफेज्युलाई धन्यबाद । तर आदि गायक भनेर त जो हज्जारौंहजार बर्षपहिला देखि अबिरलरुपमा गाउदै आइरहनु भएका याक्खामा,याक्खाबा,याक्थुम्मा,याक्थुम्बा स्रस्टाहरुलाई नै भन्नु र मान्नु पर्ने हुन्छ । आदिम स्रस्टाहरुको जुन शास्त्रीय संगीतको भाषा थियो । त्यसलाई मैले आधुनिक संगीत बिज्ञानको साचोमा ढालेर परिमार्जन गर्न सम्ममात्र खोजेको हुं । त्यसरी पुरानो कसिमा नौलो मसी भरेर लिम्बुवानी संगीतिक फाटमा के कस्तो सहयोग भनौं वा योगदान पुरयाउन सकें , जसको मुल्यङकन स्रोताहरु माझ सुरक्षित नै होला । सक्दो त याक्थुङ्ग साम्लो संगीत बिज्ञानको फांटलाई बेस्सरी नै फराकिलो पार्ने सोंच बोकेको छु । हेरौं आगामी दिनहरुले कस्तो नतिजा ल्याउंछ ।
अब आउदा लिम्बु भाषिका संगीतकर्मी आफना उत्तराधिकारीहरुलाई कस्तो सुझाव दिनु हुन्छ भन्ने बारेमा । आउदा नयां जेनेरेशनका लिम्बुवानी कलाकार , साहित्याकारहरुले सिङगै लिम्बुवान र लिम्बुवानी जनताका गीतहरु गाउनु हुनेछ , लेख्नु हुनेछ र लिम्बुवानी जनताको हक अधिकारको खोजी भइरहेको अभिनयका नृत्यहरुको प्रदर्शनमा संस्कार संस्कृती र धार्मिक प्रकृतिका आकार प्रकारको रेखाचित्रभित्रैबाट जनताहरुको सम्बोधन गर्नुहुनेछ भन्ने यो मनको चाहना छ । अजङ्ग सिङगै पहराको कापमा सुनौलो सुनखरी फक्रिए झैं गरी लिम्बुवानबादी स्रस्टाहरुको कलमबाट सृजनशील रचनाहरु उमार्नु हुनेछ र ती उर्बरशील सृजनाका थुंगाहरुले युगौंयुगसम्म लिम्बुवानको शोभा बढाइरहनेछ , मा आशाबादी रहनेछु । जुन गीत संगीत र स्वरलहरी सङगमको आवाजहरुमा पहाडहरु नाचेका,हिमालहरु हांसेको संस्कार संस्कृति सांचेको, भाषीक मून्धूम् बांचेको , ताम्फुङ्गखे तिक्वा बासेको , सुखले जनता हांसेको र नौलो पुरानो गांसेको आदि पिरतिको कसिमा आउंदा पीढीका साहित्य संगीत र रचनाहरुको सम्प्रेषण गर्नु होला भनी सुझाव दिन चाहन्छु । देउरालीलाई कुर्दा कुर्दा थाकेका भन्ज्याङ्गहरु , तपाइको सरगमका भाषाहरुमा झुम्मिएर अगालो मारुन । अनि तपाईको मिठो स्वरलहरीका लिपिहरुमा लहस्सिएर कुस्रक्पाहरुमा लाम्बरी तानुन् । बिरहमा डुबेका सेमेक्वा र सेल्लोक्वाहरु मेरा उत्तराधिकारहरुको स्वर सर्गमहरु भरि नौलो भाषाहरुमा सधै सधै झूमिरहुन । चैतमा सिङ्गारिएकी गुरांशे बन पाखाहरु लिम्बुवानी साङगीतिक लोक भाषाको साक्थुनधुन र मेत्काम्गाम्म्हरुमा डुलुन ।
घ)लिम्बु गीत संगीतको भबिष्य बारे ,
हाम्रो बजार स्यानो छ । हाम्रो लिम्बु भाषा पनि घाइते अवस्थामा पुरयाइएको छ । तीस प्रतिशत लिम्बुले आफनो भाषा बुझ्दैनन् । अत नाफा नोक्शान र ब्यापारिक हिसाव किताबले नभएर लिम्बुवानी आमाको सेवाको हिसावले काम गर्नु पर्ने परिस्थिति छ । लिम्बुवान आमाको नाममा समर्पित भएर जतिपनि कलाकार साथीहरु लागीपर्नु भएको छ । वहांहरु कसैले पनि कमाउनु भएको छैन । बरु उल्टो गुमाउनु भएको होला । शायद धेरैको बारिको टुक्राहरु बन्धकी परिरहेको हुनसक्छ । लिम्बु भाषीका गायक गायिकाहरुसामु थुप्रैनै अप्ठ्यारोहरु छन । तर पनि लिम्बुवानी कलाकारहरु निराश र हतोत्साही देखिंदैनन् । असन्तुष्टि छैनन् । पुर्खाउली भूमिमा । पुर्खाको भाषा साहित्य संगीतको लागी केही गर्न सकेकोमा सबै लिम्बु लिम्बुनी कलाकार भाइबहिनीहरु गौरन्वीत महसुश गरिरहेको मैले अनुभव गरेको छु । कति साथीहरुले त आधा पेट खाएर काम गरिरहनु भएको छ । संगीतकार आशोक लहरुङ्गलाई थाहा छ । किनकी लिम्बुवानी कलाकारहरुको ठुलो हिस्सासंग वहां सम्बन्धीत हुनुहुन्छ ।
९ तपाई राजनैतिक नेता र लिम्वूभाषाको प्रखर गायक पनि हुनुहुन्छ अव कुनलाई वढी सक्रिय ढङ्गले अगाडी वढाउने विचार गर्दै हुनुहुन्छ ? अहिले लिम्वूवानको लागि नेताको रुपमा प्रस्तुत हुन पनि आवश्यक देखिन्छ भने भाषाको लागि गायन पनि उति नै आवश्यक छ तसर्थ अवका दिनहरुमा कुन रुपले लिम्वूहरुको माझ प्रस्तुत हुने विचार गर्दै हुनुहुन्छ ?
हुन त यी दुबै बिधा एकदमै अलग अलगै धारका हुन । साह्रै नमिल्ने । एउटा एकदमै कठोर र अर्को त्यत्तिकै कोमल । तर पनि लिम्बुवान आमाको शुरक्षाको हिसावले मैले यी दुबै बिधालाई संगसगै लानु पर्ने परिस्थिति छ । गाह्रो छ । अप्ठयारो छ भनेर छाडन चाहेर पनि छाडन सकिने अवस्था छैन । सांगीतिकपक्ष मैले जन्मसिद्ध पाइल्याएको बिधा हो । गायनमा आजसम्म मैले कुनै किसिमको तालिमी प्रशिक्षणहरु लिएको छैन । स्वरसाधना कसरी गर्ने भन्ने ज्ञानपनि छैन । मेरो स्वरसाधना भनेको एकान्तमा गुन्गुनाउनुमात्रै हो । तै पनि म गीतहरु बनाइरहेको छु । संगीत भरिरहेको छु । स्वर तानेर गाइरहेको छु । स्वस्फुर्त रचनाहरु भइरहेका छन । तर अझैं म दोधारमा छु । मैले जन्माएका गीतहरुमा संगीतिक भाव छ कि छैन भनेर । मेरा गीतहरुमा गीत छ कि छैन भनेर । मेरो पहिलो गीति अल्बम् याक्थुङ्ग साम्लो भाग १ मा म्युजिक एरेन्जर गरिदिनु हुने बरिष्ठ संगीतकार तथा गायकार दिनेश सुव्बा हुन । त्यस्तै भरखरैको दुइ सिडिका अशोक लहरुङ्ग हुन । वहांहरुले केही भन्नु भएको छैन । त्यसैले मेरो गीतहरु गीतै भए होलान जस्तोसम्म भने लाग्या छ । अब स्रोतापक्षबाट भने चाही धुमधाम राम्रो खबरमात्र छ । क्यम्पसीया भाइबहिनीको बिशेषअनुरोधमा यो पाली एउटा पपसङ्ग पनि बनाइएको छ । लिम्बुवानमा तेसले खुबै इमान जमाएको खबर छ । जस्ले स्रोताहरुको भावनामा साङ्गीतिक परिवर्तनको चाहना देखाको छ । त्यसैले अब आउने दिनहरुको सवालबारे सोचेर म हाक्पारे र पालामको छन्दहरु मनमनैमा बुन्दैछु । शायद अबको पालो भनेको हाक्पारे र पालामको हुनु पर्दछ । तेस्तै यो पालिको हङ्गकङ्गको अत्यान्तै कठोर जाढोले यो बुढो शरिरलाई धर्तिबाटै झन्नैझन्नै बिस्थापित गरयो । मन पनि अशान्त र बिचलित भाथ्यो । तेसैले मनहरुमा एउटा गीतिखाका कोरिएको छ । यसरी हाक्पारे र पालाम पछिको मेरो अल्बमको नाम भनेको चिक्तै चिक्तै रहने टुङगो लागिसको । भुइफुट्टा धामीलाई कसैले कमाउनै पर्दैन । आफै कामिहाल्छ । यो भो मेरो सांगितिक बिधाको लाइन र अब राजनितिक सवालबारेको कुरो हो भने , सर्बप्रथम त म याक्थुम्बा -लिम्बु) कूलबंशको लिम्बुवानी धर्तिपुत्र हुं । मेरा पुर्खा फेदापहाङ्ग हुन । जो दश लिम्बु शाषकहरुमध्यका एक महाराजा थिए । ति पुर्खाहरुको रगत पसिनाले चारकिल्ला बांधि ताप्पथेक्मा र सिलाम्साक्मा गरिराखेको मेरो लिम्बुवान आमाको शरिरलाई अङ्गभङ्ग पार्ने गुरुयोजनाकार ब्राम्हणवादी सोंचबाट जन्मेका ब्राम्हणदत्तक् पुत्रहरुको अगाडी म एक चेतनशील लिम्बुवानबादी साहित्यकार , रचनाकार गीत र संगीतकारको हैसियतले ति जानी दुश्मन शत्रुहरुको अगाडी कसरी आत्मासमर्पण गर्न सक्छु होला र । अब भन्नुस । मैले राजनिति गर्नु पर्ला कि नपर्ला । लिम्बुवानमा राजनैतिक ब्यक्तित्वको अभाव खडकियो भनेर होइन । लिम्बुवानमा थुप्रै माननिय मन्त्रीज्युहरुको कुर्सीहरु खाली हुदैछ रे भनेर पनि होइन । एक कर्तब्यनिष्ठ सचेत लिम्बुवानी जनताको हैशियतले सोच्ने हो भने राजनिति गर्नु मेरो बाध्यता हो । यदि लिम्बुवान आमालाई मेरो आवश्येकता परयो भने म आफनो शरिरमा भएको सम्पूर्ण रगत चढाउन तयार छु । मेरो लिम्बुवान आमाको शरीरमाथी दुर्भावना बोकेर आउने हज्जारौंहजार शत्रुहरुको खप्पर फुटांउने बज्र बनेर बर्सिनलाई म हरदम तम्तयार छु । लिम्बुवानआमाको शरिरलाई अङ्गभङ्ग गर्न खोज्ने ब्राम्हणदत्तक्कपुत्रहरुलाई तत्कालै समाप्त पार्नु पर्छ भन्ने सोंचको बिकास सम्पुर्ण लिम्बुवानी जनताहरुको मनमसतिष्कमा पुरयाउनुपर्छ भन्ने बिचार बोकेर हिडने ब्यक्ति हुं । भन्नुस । यसलाई राजनिति भन्ने कि , वा अन्य केही । राजनिति गर्नु रहर होइन , परिस्थिति हो । बाध्यता हो । तपाई हामीले नै लिम्बुवानआमाबारे सोचेनौ भने अरु कस्ले सोच्ने । त्यसैले राजनिति जस्तो कठोर र फोहोरी खेल र गुलावको फूलभन्दा पनि कोमल कपासको रुवा भन्दापनि नरम मायैमायाको सितलु छाहारीमुनी प्रेम पिरतिको थुंगाहरुसंगै फक्रिरहने गीत संगीतलाई संगसगै लैजान म बाध्य छु । यो मेरो ब्यक्तिगत होइन । लिम्बुवानको परिस्थिति हो । यो तरल अवस्थामा । लिम्बुवानी जनता र नेतृत्व पंङतीले मेरो आभाव महसुश गरेमा र आवश्यकता ठानेमा म जुनसुकै र जस्तोसुकै अवस्था र परिस्थितिको घडिमा पनि आफ्नो उपस्थिति जनाउन तयार रहेको सम्पूर्ण लिम्बुवानी जनतामा जानकारी गराउन चाहन्छु । खै यसलाई राजनिति भन्ने हो कि संगति भित्रै गाभ्ने हो ।
१० थोरै प्रसंग फेरौं है त । लिम्बु र गायर लिम्बुको बारेमा भन्नु पर्दा थारु , धिमाल , बंगाली-कोचे) माझी , याक्खा , अथाप्प्रेर्राई , लाप्चे वा लेप्चा , याम्फु , लहरुङ्ग , मेवाहाङ्ग र मदेम्बा-थाक्से भोटे शेर्पा) आदि उपरोक्त थर जातिसमुहहरु लिम्बु जातिभित्रैको हुन वा अरुनै हुन । अर्थात लिम्बु या गैर लिम्बु । के भन्नुहुन्छ वहांहरुलाई । किनभने तपाईको गीत , संगीतको रचनाभित्रको मूल स्रोतको रुपमा देखापरेका छन , यि माथिका थर जतिका सम्बोधनहरु । तेसैले यो पश्न राखिएको हो । कृपया प्रस्टयाई दिनु हुन्छ कि ?
उत्तम प्रश्नको लागी धन्यवाद तपाईलाई । पहिलो कुरो त लिम्बु भन्ने जातै हुदैन । तेसैले लिम्बु हाम्रो जाती होइन । लिम्बु -लिबुङ्ग) देशको नाम हो । र लिम्बुहरुको वास्ताबिक जातीय पहिचान भनेको याक्थुङ्ग , याक्थुम्बा अथवा याक्थुङ्गहाङ्ग हो । तेसरी लिम्बुवान देशका आदिम आदिबासी शाषक जातीहरु भएकोले लिम्बु भनिएकोमात्र हो । साचो र सत्ते लेख्ने हो भने लिम्बुहरुले आफनो जातीको महलमा याक्थुङ्ग , याक्थुम्बा , वा याक्थुङ्गहाङ्गनै लेख्नुपर्छ । उदाहारणको लागी जस्तै , चैनाको मान्छेलाई चिना । भारतको मान्छेलाई भारती । बंगालको मान्छेलाई बंगाली र भोटको मान्छेलाई भोटे भने जस्तैरी लिम्बुवानका याक्थुम्बाहरुलाई लिम्बु भनिएकोमात्र हो । त्यसैले लिम्बुहरुनै याक्थुम्बा हुन । तर लिम्बुवान देशका भूमिपुत्रहरुले आफनो देशको नाममा आफनो जातलाई गासेर लेख्न चाहेमा आपत्ति मान्नु पर्ने ठाउ चाही छैन । मतलव याक्थुम्बाहरुले लिम्बु लेख्न लेखाउन पाइन्छ । पाइन्न भनेको होइन । तर जतिको याक्थुम्बामा मौलिकताहरु छन , लिम्बुमा तेत्तिको हुन्न भन्यामात्र हो । त्यस्तैरी राइ , सुब्बा , मझिया , बझिया , जिमी , दिवान , चौधरी आदिकुनै पनि जात होइन । सबै चन्धने बाहुन र क्षेत्रिहरुले सोझा हाम्रा पुर्खाहरुको इमान्दारिताको फाइदा उठाइ जालसांझी गरेर हामी आदिबासी भूमिपुत्रहरुको टाउकोमा जिउदै बाधीदिएको कात्रोको प्रमाण हो । त्यही कात्रोलाई आफनो शिको ताज सम्झी जातीय पहिचानको झण्डा बनाएर राइ सुब्बा लेख्नु हाम्रो जातीय महा भूल हो । यसलाई तुरुन्तै परिवर्तन गरिहाल्नु पर्ने देखिन्छ । यो बिषय सामाजशास्त्र अन्तर्गतको हुनाले उत्तर अलि लामु हुन सक्छ कृपया झन्जटनमानी पढीदिनु भए बेफाइदा भने नहोला । अब गैर लिम्बु भन्नाले,अलिम्बु र लिम्बुको बारेमा चर्चा गर्नु पर्दाको कुरो यस्तो छ । यसलाई कित्ता काटेर बिश्लेषण गरौं है त ।
नम्बर १ मा याक्खाहरुबाट जाउ - याक्खाहरु भनेको १०० प्रतिशतले याक्थुम्बा -लिम्बु) हुन । तर उनहिरुलेनै हामी याक्थुम्बा लिम्बू हौ भनेर स्विकारी आफनो जातीय पहिचानको महलमा सच्याउनुपर्छ । किनभने करकापले ब्यक्तिको ब्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा हानी पुगी बाधा अड्चनहरु उत्पन्न हुनसक्छ । आत्मानिर्णयको कुरोहरु उठ्न सक्छ । त्यसमाथि पनि ब्राह्माणदत्तक्कहरुको जग्गजगी मच्चिरहेको अवस्था छ । तर कुरोलाई चुरोमा पुरयाई छिनाएरै भन्ने हो भने , याक्खाहरुले याक्थुम्बा वा याक्थुङ्गहाङ्ग लेख्नुमै मौलिक्ता र ऐतिहासिकताले अति शोभायमान हुनेछ ,हालसम्ममा ५० प्रतिशात याक्खाहरुले याक्थुम्बा लेख्नुभएको छ भने केहीले गोर्खा भर्ति लाग्दाको बेला गल्लावाल गूरुजी राइ हुदा राइ जात लेखि लेखाई आफुहरु राइ बनेको बताउनु हुन्छ , वहाहरु संख्यामा थोरनै हुनुहुन्छ । र बाकी याक्खाहरुभित्रका सामान्ती र शोषक बर्गहरुले भने दिवान -देवान) जिमी , मझिया , र तेस्तै सामान्ती बर्गका लिम्बुहरु पनि सुब्बा र अलि पछिबाट आफनो थरहरु लेखेका छन ।
२)मा अथाप्प्रे राइहरु - अथाप्प्रेहरु भनेका छथरे लिम्बुहरु हुन । हालका बरिष्ठ नेता संघीय लोकतानित्रक राष्ट्रिय मन्चका अध्यक्ष कमल छाराहाङ्गजीलाई सोध्नु होला कि तुङ्गखङ्ग लिम्बुहरुसंग छाराहाङ्गहरुको के सम्बन्ध छ । तर वहाहरुलाई राइ भटराइ लेख्दा फाइदा छ भने त राम्रै हो । आखिर लिम्बु राइ भन्या दाइभाई नै त हो नि ।
३) थारु,धिमाल पनि मधेसे लिम्बुहरुनै हुन - तर थारुहरु धेरै धनी छन र लिम्बुहरु धेरै नै गरिब छन । थारुहरु धेरै पढेलेखेका छन र ठुलठुला दर्जामा पुगेका छन । तेसरी थारुहरुको हैशियत लिम्बुहरुको भन्दा उच्च देखिन्छ । अत थारुपनि लिम्बु कुलबंशको सगोत्री हो भन्दा थारुहरु शायद रिसाउन पनि सक्छन । थारुहरुमा हिन्दु धर्मको गहिरो प्रभाव परेको छ । तर बानी ब्यहोराचाही लिम्बुसंग छुटिन सकेको छैन । हिउदमा रामलिला रचाई पैसा खुब उढाउछन । मेला हटियाहरुमा लेतेपेते हुनेगरी जाड रक्सी पिएर बाहुनसंग मित -मिता) लाएर खेतबारी दान दक्षिणा दिएर हिजोआज थारुहरु पश्विमतिर कता हो , तन्नम भई अर्धदाशको अवस्थामा पुग्याछन् रे । तर कोशी मेचीका थारुहरु अझैपनि राजा समानका हैशियतमा छन । मधेसको गर्मीले गर्दा थारुहरु कालो र पहाडी लिम्बुहरु गोरो छन । यति रंग मात्रको फरक छ । केही थारुहरुको थरहरु जिमी , मझिया , दिवान , लाक्सम आदि छ । र धिमालहरुले त आफुहरु लिम्बुवानको मधेसे लिम्बु हौं भनी दाबीनै गरिरहनु भएको छ । धिमालको च्याब्रुङ्ग नचाइ त्यसको प्रमाण हो । र लिम्बुहरुसंगको सरबरीमा कुटुम्बेरी हुनु अर्को उदाहरण हो ।
४) कोचे बंगालीहरुसंग लिम्बुहरुको पुरानो बंशाणुगत सम्बध छ । उनिहरुले पनि राजाबंशी भन्दा याक्थुम्बा -लिम्बु) लेखेमा राम्रो हुन्छ । किनकी राजबंश भन्ने जुन शब्द हो त्यो बाहुनहरुको बेद भाषाबाट आको उच्चारण हो जसमा बंगाली भाषाको कुनै औचित्य छैन । र राजबंश शब्दले भबिष्यमा कोचे बंगालीहरुको जातीय भाषाको प्रतिनिधित्वसमेत गर्ने छैन । तबल पुरिया , चावलपुरिया , र ताडपुरिया , ताजपुरिया भन्दा त बरु सिधै बंगाली अथवा कोचे लेखेमा धेरै राम्रो हुन्छ । किनभने राइ र सुब्बा भने जस्तै राजाबंश जातथर लेख्नु खोज्नु पनि एक असभ्य जमानाको चिनो बचाई राख्नु जस्तोमात्रै हो ।
५) लाप्चे र लेप्चाबारेमा - लिम्बु वा राइले आफनो कूल पित्रकी इस्टदेबी यूमा साम्माङ्ग -बुढी बजु) लाई त्यागेर बुद्धको मुर्तिस्थापना गरी बुद्धमार्गी भई गएमा स्वतह लाप्चे वा लेप्चा कहलाइन्छन । तर फेरी बुद्धको मुर्तिलाई पुज्न छोडी मुन्धूमकी युमा साम्माङ्गलाईनै मान्न थालेमा पुन लिम्बुनै हुनेछ गर्दछन । सेत्लिङ्ग , लक्सम्बा , नेम्बाङ्ग , काम्बाङ्ग , ताम्लिङ्ग जस्तै अरुपनि लाप्चेकुलका बंशहरु पहिला याक्थुम्बानै थिए । तर लाप्चेलाई लिम्बु , सुब्बा , लेप्चा सबै लेख्ने छुट छ । आफ्नो परिचयमा लेप्चा भने पनि नागरिकतामा लिम्बुनै लेखेको साथीहरु भेटिन्छ । र लाप्चेको मूल कुटुम्बा पनि याक्थुम्बानै हुन । लेप्चाको उदगमस्थल पनि याक्थुम्बै भित्र पर्दछ । तर हिजोआज लेप्चाहरु बुद्धिस्ट भन्दा धेरैजसो क्रिष्चियनमार्गी भइसके । जसबाट उनिहरुलाई धेरै फाइदा पनि भयो । इष्टइण्डीया कम्पनी सरकारको पालामा रेसिडेन्सियल एरिया भनि कालेम्बुङ्ग र दारजिलिङ्गलाई तोकेको र उक्त ठाउहरुमा लाप्चे र लिम्बुहरुको घना बस्ती हुनाले त्यसो भएको हो । लाप्चेहरुको पहिलो शक्तिशाली राजा मु,इताइची इमेत्ल हाङ्ग हुन । १० लिम्बुवान भित्रका एक राजा जो इलाम आङ्गदाङ्ग यक्कमा उनको राजधनी थियो । उनका बंशजहरु अचेल सेत्लिङ्ग लिम्बु र लेप्चा लेख्छन ।
६) याम्फु , लहरुङ्ग र मेवाहाङ्गहरु १० लिम्बुवान हिदाङ्ग क्षेत्रका राजा खान्दानी याक्थुम्बा -लिम्बु)हरु हुन । १८३१ को सन्धीपछी यिनीहरुका पुर्खाहरुले जिमी , मझिया, राइ , आदि लेख्न थालेको लिखतमा पाइन्छ । उसो त हिदाङ्ग क्षेत्रका याक्थुम्बा लिम्बुहरु पनि राइ नै जात लेखिआएकोस्रेस्तामा भेटिन्छ । जस्तै बारबिसे गा.बि.स.का पंचायतकालीन प्रधानपंच धन बहादुर राइ र सामान्त भनेर नाम चलेका महाजन कान्छा राइहरुको बंशावली हेर्दा ओ नेम् थरका लिम्बु देखिन्छन । लेप्चाको नागरिक्तामा लिम्बु भेटिएजस्तै संखुवासभाको केही लिम्बुहरुको नागरिक्तामा राइनै जाती लेखिएको प्रमाणहरु छ्यास्छ्यास्ती भेटिन्छ । महाजन कान्छा राइ बर्ष७६लाई मैले किन राइ जात लेख्नु भो भनी प्रश्न गर्दा उन्ले भने । मेवाहाङ्ग , लहरुङ्ग , आम्फ -याम्फु) दाजुभाईहरु सबैले र्राई लेखे , तेसैले हामीलेनी लेखेको हो । हुन त राइ हम्रो दर्जामात्र हो । जात चाही याक्थुम्बानै हो । तर हिजोआजकाले राइ पनि जातै हो भन्न थाले । उनेरको पनि खुम्बुचाही जात हो । राइ होइन । तर जमाना फेरियो । यि आफु भने मावोवादीबाट खेदियो । यहा काठमाण्डौमा यि सुकुम्बासी बनाई दिए । राइ लेखेपछी यो लिम्बुको ढोल -च्या ब्रुङ्ग) किन बजाउने । अब त हामी चण्डीरण्डीको नाममा पो नाच्नुपर्छ त भन्छन । अचेलका पढेलेखेका भनाउदाहरुले । नेता उ तेही मेवाहाङ्ग लिम्बुनै हो । हामी जस्तै धरमाचाही लिम्बु ह भन्छौ । तर कागत्तमाचाही र्राई लेख्छौं । राइ र लिम्बुमा के फरक छ र । एक्कै हो । त्यो के त्यो जिल्ला सभापति भाथ्यो , केदार राइ भन्छन नि । सुर्य बहादुर थापाका मान्छे । बि.ए.पास रे । तेस्ताहरु छन । बोल्नु हुन्न । मारी हाल्छन । मेरा नौ ओटा बन्दुक लगे । एउटा पिस्तोल चाही ति म्रो रक्षाको लागी लौ भने बांकी सबै लगे । कम्निस्टेहरुले । यो बोली संखुवासभाका सामान्त प्रख्यात कान्छा राइको हो ।
७) थाक्से , भोटे , शेर्पाहरु लिम्बु हुन त बारे - श्यार्बा बाट बनेको शब्द शेर्पा हो । श्यार्बा , शेर्पाको अर्थ तिबेत्तियन भाषामा पुर्व अथवा पुर्वेली हुन्छ । राडिको तान , गलैंचा बुन्नेलाई लिम्बु भाषामा थाक्चे , थाक्सेक्पा , थाक्केसा पनि भनिन्छ । त्यही शब्दको अपभ्रम्स हो थाक्से । भोटेचाही त भोटबाट बसाइसरी आका हुनाले भोटे भन्या हो । भोटेहरुले बुद्धधर्म छोडी मुन्धुम् धर्म मानेमा मदेनसङबा लिम्बु हुन्छन । तर बुर्द्धधर्मनै मानिरहेमा उ थाक्से , भोटेनै हुन्छ । समग्रमा भन्नु पर्दा सेन्युक्केन्मदेन्छङ्गनै उनीहरुको जात हुन्छ । थाक्से , भोटे , शेर्पा भन्या कुनै जात होइन । हुन त ब्यक्तिको इच्छामा भर पर्ने कुरो हो । कसैले आफुलाई थाक्से भोटे भन्नमै गौरव महशुस गर्छ भने उसको इच्छा र बिचारको सम्मान पनि गर्नुपर्छ । किनकी ब्यक्तिको दुनिया भनेको इच्छा र बिचार नै हो । यि माथिका सबै जातजातिहरु लिम्बुवानका आदिबासी जातिमात्र नभएर याक्थुम्बा कूलबंशकै नश्ल हुनाले रचनाहरुमा मिस्सिएर संगीतका बुटाहरुबनी स्वरलिपिहरुमा खिपिएका हुन । भोटे र थारुलाई जबरजस्ती लिम्बु लेख भन्न खोज्या होइन । त्यसो भन्न पनि मिल्दैन । र हुदैन पनि । तर पनि , यस्तो मौलिक कुरोहरु । नया पुस्ताकालाई थाहा नुहुन सक्छ । हाम्रोपुस्ता सिद्धिएपछि , यो सामाग्रीको स्रोत पनि तुरिन्छ । त्यसैले यो सन्देशहरु पछिल्लो पीढीका पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्न खोजेको मात्र हुं ।
११ लिम्बुवान भन्नाले त्यसको निश्चित भौगालिकक्षेत्र कति हो र त्यसको आधार प्रमाणहरु के हो ?
पश्चिमउत्तरमा संखुवा र शिशुवा खला मध्यपहाडी क्षेत्रमा हिदाङ्ग -अरुन) नदी दक्षिणी तराइक्षेत्रमा सप्तकोशीदेखी पुर्व भारत उत्तर हिमालय दक्षिण र मेची नदी पश्चिम येति चारकिल्ला भित्रको अर्थात बर्तमान प्रशासनिक क्षेत्रको हिसाबले कोशी र मेची अन्चलभित्रको भूभागनै आदिम लिम्बुवान राज्यको मानचित्र थियो । र यहीनै सदर रहनेछ । यसका आधार प्रमाणहरु आवश्यकता परेको खण्डमा प्रस्तुत हुनेछ । १८३१को सन्धीपत्रमात्र यसको आधर प्रमाण होइन । दह्रो प्रमाणहरु अरुनै छ । दाबी बिरोध हुनु स्वभाबिकै हो । छलफल र वार्ताद्धारा त्यसको निदान गर्नुपर्छ । दत्तकहरुसंग केही प्रमाण स्रमाण छैन । खाली मालिक रिझाउने काममात्र हो ।
१२ तपाइले गायनलाई कहिले सम्म अङ्गाल्ने बिचार गर्दै हुनुहुन्छ ? यो कलालाई नेपाली भाषाको क्षेत्रमा पनि प्रयोग गर्ने बिचार छ कि ? यसरी गायन र लेखनमा लाग्नुमा परीवारीक पृष्ठभूमि पनि छ कि ?
गायन बिधा यो जूनिको अभिन्न अङ्ग जस्तै हो । त्यसैले यो मेरो भौतिक शरिरको अवशान पनि सुन्दर रचनाहरुको छन्दहरुमा बन्द भएर सुरिलो स्वरलिपिहरुभित्रै बिलय भएर जावोस भन्ने चाहना छ । किनकी साम्लो र फेदापहाङ्ग एकअर्कामा पर्यायवाची शब्द जस्तै बनिसकेका छन । छुटिन गाह्रो छ । त्यसैले गीत र संगीत मेरो जीवनको अन्तिम घडीसम्मै सबै भन्दा नजिकको साथी बनेर साथ दिइरहने छ । नेपाली भाषाक्षेत्रमा काम गर्ने कि नगर्ने बारेमा , नेपाली गीत संगीतको कुरो चल्या छ । समयभावले भ्याइरहेको छैन । कलाको निजी भाषा हुदैन । गीत संगीतको आफनो जात हुदैन । कला जनताको सृङ्गार हो भने गीत संगीत जनताको बोली हो , जसको ब्यख्या र परिभाषाहरुनै तेसको जात हो जस्तो लाग्छ मलाई । र उसका सुन्दर भावहरुचाही आकारहरु हुनुपर्छ । जुन आकारहरुले हामीलाई हसाउने , रुवाउने , नचौने र मनोरन्जन गर्राई आनन्द दिलाउने काम गर्दछ । मेरो ख्यालमा त्यो सबै जीवप्राणीहरुको आवाजमा हुनुपर्छ । त्यो नै गीत संगीतको भाषा होला जस्तो ठानेको छ यो मेरो मनले । १५० भन्दा धेरै नेपाली गीतहरु लेख्या छु । कम्पोजमा पनि छन । क्यासेटिङ्ग गर्ने भन्दाभन्दै बुढो भइसकियो । अझै गर्ने बिचारमै छु । तर गर्छु भनेर मात्र नहुदोरहेछ । पहिलो कुरो त , समय चाहियो । पैसा चाहियो । वातावरण चाहियो । साधना चाहियो । अनुकूल स्वस्थ चाहियो । सहायोगको भावना चाहियो । हौसला पनि चाहियो । हत्तेरिका अझै थुप्रै केकेहरुपनि पो चाहिन्छ चाहिन्छ । जुन सबैहरुको अनुकूल बनीरहेको छैन । तेसैले नजुरेको हो । तर गर्नुपर्छ भन्ने सोंचमा चाहीं छु । किनभने केही मेरो गीतहरुलाई नेपाली छन्दभित्र बन्द भाका आवाजहरु सुनाउनै पर्नेछ । त्यसरी मेरा श्रोताहरुलाई नेपाली गीतको प्रतिक्षा गर्नुहुन्न । अश्वासन चाहीं दिन चाहन्छु । तर आयुले पो के भन्छ कुन्नी
१३ अन्तमा लिम्बुवान ब्लगस्पोट मार्फ समस्त देश बिदेश छरिएर रहनु भएका लिम्बु गैरलिम्बु स्रोतहरुलाई केही सन्देश बाड्न चाहानु हुन्छ कि ?
सान्सार ढाकेर बस्नुभएका आदारणीय लिम्बु तथा गैर लिम्बु स्रोता कुलबन्धुहरु । साथीहरु र साङ्गगीतिक एकैआतका आफन्तहरुमा ओभानो , न्यानो मायाहरुसंगै बधिलो सम्झनाको खबर । तपाइहरुको नाउमा आसेवारो । कुन्दाङमा नु कुन्दाङबासे । सर्बप्रथम त । कृपया लिम्बुवान र लिम्बुकूलको बारेमा अध्यायन गर्ने र सोबारेमा केही जान्ने समय निकाल्नु होला भनी अनुरोध गर्दछु । बिश्वको कुनैपनि कुनामाहोस् । याक्थुम्बा -लिम्बु) भाषा , लिपि , धर्म , संस्कृती , र लिम्बुवानको मौलिक रितिथितिलाई त्यसै थक्याईराख्ने काममात्र नगरी त्यसलाई प्रयोगमा ल्याई परिचालन गरिरहनु होला भनि निबेदन गर्दछु । किनी कुनैपनि साधनलाई प्रयोगमा नल्याउनु भनेको त्यसलाई अफाल्नु वा खियापारी खेरफाल्नु जस्तै हो । तेसैले लिम्बुको बिधि र बिधाहरुलाई जतिसक्दो प्रयोगमा ल्याउनुहुन सुझाव पेश गर्दछु । जस्को निम्ती तपाइले पैसा खर्चिनु पर्दैन । भावना बोक्नु परयो । मन दिनु परो । र थोरै समयको जोहो गर्नु पर्छ । ८० प्रतिषत भन्दा बढीजसो लिम्बुवान सरकार बन्ने सम्भावना तयार भई सक्यो । लिम्बुवानमा सरकार बनेपछी सरकार चलाउनको निम्ती लाखौं कर्मचारीहरुको आश्यकता पर्दछ । सिपाही देखी जर्नेलसम्म र पिउन देखी खरदार न्यायधीश , डाइरेक्टर , बिधायक , संसद , सचिव , मन्त्री र मुख्य मन्त्रीसम्मका ओहोदाहरुको माग हुनेछ । तर त्यसमा पनि प्रशासनिक सन्यन्त्र अन्तर्गतका दर्जाहरुमा जागिरे बन्नलाई लिम्बुवानको लिम्बु भाषा लेख्न तथा पढन दुबै जानेको हुनु पर्नेछ । नेपाली र अंग्रजीलेमात्र काम चल्दैन । तेसैले यो बिशाल इक्शा खाम्बेकको जुनसुकै पाटोमा रहनु भएको होता पनि आफना सन्तानलाई भोलि गएर मेराबंशजले पनि लिम्बुवानको उत्तराधिकारी बन्न सकोस भन्ने चाहना राख्नु हुन्छ भने , तपाइले यो मेरो अनतरवार्ता हेरेकै दिन देखि आफनो सन्ततिलाई अनुकूल वातावरण मिलाएर लिम्बु भाषा र लिपिको अध्यायन गराउनु होला भनी इङ्गघङ्ग पठाएको अनुरोध गरें । अहिलेको नेपाल प्रजातन्त्र हुदै गणतन्त्रात्मक घोषणा भईसकेको छ । तर पनि नेपाल सरकारको सरकारी तथा गायरसरकारी क्षेत्र -ब्युरोक्रेसि)मा अझै पनि ९७ प्रतिशषत भन्द धेरै जागिरे धन्दावाज कुर्सीहरुमा चुच्चे नाक भाका गैर आदिबासीहरुकै एकलौटी कब्जा छ । नेप्टे रिसाएर के गर्ने । चुच्चेलाई मुन्टाएर बुच्चे बस्ने कुरो मिल्दैन क्यारे । राज्यकोषको ओढने ओछयाउने , ताला चाबी सबै चुच्चेकै हातमा छ । मेरो भन्नु के हो भने भोली लिम्बुवान सरकार गठन भए पछि पनि हामी लिम्बुवानका आदिबासीहरुलाई क्षेत्रीबाहुनले ठाउनै दिएनन । साम्प्रदायिक गरे । चुच्चेले अन्याय गर्यो । गुहार , गुहार भन्नु पर्दा कस्तो लाजमर्दो हुन्छ । लिम्बुवानका धेरै क्षेत्रीबाहुन साथीहरुले आफना नानीहरुलाई भित्रभित्रै शिरिजङ्गा लिपि पढाइरहनु भएको छ । भाषा त जानेकै छन । यो मामलामा आर्यनहरु धेरै दुरदर्शी छन । असल कुरो हामीले चुच्चेहरुबाटै सिक्नु पर्छ । किनकी तिनीहरु चत्तुरमात्र होइन सिष्ट पनि छन । चुच्चेहरु हाम्रा शत्रु होइनन् । मित्रै हुन । तर तिनीहरुमा रहेको ब्राह्मणबादी सोंचचाही खराबी हो । जसलाई चुच्चे र बुच्चे दुबै मिलेर हटाउनु पर्छ ।
लिम्बुवानको उत्तराधिकारी उत्पादक अभिभावकहरुले , छोरा छोरीका नाउहरु आफनै भाषाबाट राख्नु होला । किनकी गंगा,जमुना,सरस्वती, दुर्गा,लक्ष्मी,पार्बती, सिता,गीता,अमृता र राम,लक्ष्मण,भरत,अर्जुन,भिम,कृष्ण, र दुर्योधन जस्ता नामहरु सबै जनैधारी हिन्दु धर्मी तागाबाहरुको नामहरु हुन । अहिन्दु मुन्धुमी लिम्बु आफैंले हिन्दुहरुको धार्मिक झण्डालाई शिरकोताज बनाई सझाउनु हो । प्रचार प्रसार गर्नु होस् । हिन्दु नामधारी लिम्बु तथा गैरलिम्बु आदिबासीहरुले । जुन काम राम्रो होइन । के गर्नु , पाहुनले तेस्तै नाम राखितिन्छ त । कसैले भने । तर १० महिना पेटमा बच्चा बोकी आमाबाबुले कत्रो दुख गरेर तयार पारेको नानी पाउने बितिकै खल्तिमा दाम बोकेर बाहुनको घर धाउनु र त्यही चुच्चे बाहुनलाई नराम्रो देखाउने हाम्रो पुरानो बानिलाई छोडनु पर्यो । त्यो बाहुनको होइन लिम्बुको कमजोरी हो । त्यो हिन्दु नामले पछिबाट लिम्बुको कूललाईनै हानी पुराउछ । हिन्दु धर्मको घघडान बिरोधी एउटा लिम्बु नेताको नाम हो राम बहादुर तुम्बाहाङ्गफे । सुन्दै असान्दार्भिक लाग्ने । लाजै लागेर आउने । निक्कै अप्ठयारो छन कुराहरु । हामी हिन्दु होइनौ मुन्धुमी हौं भने किन हिन्दु नाम राख्नु पर्यो र । किन लिम्बु भाषामा मिल्दैन । मिल्छ तर बानी छैनरे । कोही यसो भन्छन । आफनै इस्टदेबीको सौताको नाममा छोरीको नाम राख्नु राम्रो त हुंदैहोइन । यस्तो गलत काम गर्नु भएन । यस्ता नामहरु त खासगरी आफनो कुल बंशको अत्तोपत्तो नभाको खाते बतासे र अर्ध पागलहरुको पो हुने पर्न हो । हाम्रा बाजे बराजेहरुलाई २४० बर्षसम्म हिन्दुधर्म शासनले मिच्यो । पढन लेख्न पाएनन् । उक्तबारे ज्ञान भएन । वा भएर पनि तेसो गर्नेपरिस्थिती थिएन । त्यसैले वहाहरुबाट भूल भो । तर अबका भूमिपुत्रहरु । सामाजशास्त्रमा पि.एच.डि.गरेर पनि श्री कृष्ण बहादुर भट्टचन , हर्के गुरुङ्ग , लार्के तामाङ्ग , चन्धर्के लिम्बु , श्री रामकृष्णाजी बान्तावाराइ ,आत्मानन्द लिङ्गदेन , गोरे र सुर्यबंशी मगर चन्द्रकबंशी थारु र हिरा धिमाल्नी भनेर आफैले आफैलाई खाने बतासेको समुहमा जबरजस्ती दर्ज गराउने काम गरिरहनु भएको छ । यो गल्ती भाषिक अज्ञानतालेमात्र होइन । बौध्दिक दरि द्रको कारण पनि भनौ भने डा. श्री कृष्णा भट्टचन जस्ता हिन्दु धर्मका खरो आलोचकको नाम पनि श्री कृष्णा छ । तर हुन सक्छ , थकालीहरुको आफनो भाषा नभएर तेसो भा होला । तर बैरागी काइला , चैतन्य सुब्बा , लिम्बु भाषाका महाकवी अमर सुब्बा र निक्कैको कवी हुं भनेर थुप्रै चर्चा बटुलेका बि क्रम सुब्बाहरुको त सबै थियो र पनि खल्तीमा दाम बोकेर बाहुनकै घर ....। तर बौध्दिकहरुबाट यहां यस्तै भइरहेछ । यसलाइ सुधार गर्नु आवश्यक छ । अप्ठ्यारो केही छैन । खाली नामहरुलाई आफ्नो भाषाकरण गर्नुमात्र हो । यसमा हानी नोक्सानी केही छैन । नाफैनाफामात्र छ । अब त्यो गलत कामलाई चटक्कै छोडेर सही दिशातर्फमोडिने हो भने आउनु होस । तपसिलका नाउहरुमध्येबाट कुनै एक नाम छानेर आजै देखि आफनै भाषामा मौलिक्ताले भरिपूर्ण नाउहरु आफना छोरी र छाराहरुको निम्ती चुनौं ।
उदाहरणको लागी तल केही नामहरु लेखिएका छन ।
१ सिक्कुम याक्थुम्बा , याक्थुम्मा या लिम्बु अथवा कुनै आफुलाई लाग्या ।
२ निङ्गवा ३ सुङ्गनाम ४ फुङ्गनाम
५ साम्मित्ला ६ साम्लो ७ इङ्गला
८ मिङ्गला ९ पोकन्दी १० लोकन्दी
११ मुक्कुम्म १२ मिराक १३ मिस्साम्
१४ निस्साम १५ आङ्गला १६ पाङ्गमा
१७ हाङ्गला १८ माङ्गला १९ साङ्गला
२० से से २१ साङ्ग साङ्ग २२ हाङ्ग हाङ्ग
२३ याङ याङ्ग २४ चाङ चाङ्ग २५ थाङधाङ्ग
२६ फाङ फाङ्ग २७ मुन्धूम २८ हाक्पारे
२९ ख्याली ३० अक्वामा ३१ साम्माङ्ग
३२ थेगु ३३ मङवा ३४ पङवा
३५ चोत्लुङ्ग ३६ मुजोक्लुङ्ग ३७ खाजोक्लुङ्ग
३८ खाम्चिरी ३९ खाम्बोङ्गसा ४० लुङ्गचीर-जीरी)
४१ लुङ्गपोङसा ४२ साम्फरी ४३ लाम्फरी
४४ सेन्लुङ्ग ४५ मेन्लुङ्ग ४६ इ सेन्न्
४७ इङ्ग सेन्न् ४८ सिङ्ग सेन्न् ४९ थिङ्ग सेन्न्
५० हिङ्ग सेन्न् ५० चुम्म सेन्न. ५१ युङ्ग सेन्न्
Tapain ko sangitik yatra phalos phulos tara rajniti naphulos kinaki tapain ma nirnayak sakti chhaina smaran rahos. Biswas ra abasarko pachhi kudda aaja kunai school bhatkina pugyo sabdhan. tapain swartha ma lagnale hk punu bhayo. Thank U.
Saturday, September 06, 2008 11:55:00 PM
Dear Bhagt(Lajesa) dai I viewed your interview in detail and appreciate you for giving more information about limbuwan history, political and social status, of limbu peoples. There are shown many problems and solutions in the social and political phenomena of the country. On the otherhand there pointed social discrimination by brahmins and they never want to reform in future.I think this is real fact. We are not going to apply the more oppressions by name of liberation of ethnicity. We want to keep social harmony in the country and liberate all kinds of oppressions of the peoples. On this aspiration is lackking in the interview. Otherwise emerging to limbuwan organizations social institutions and pointing politicians, social workers and intellectuals is ppreciatable.
I think you dai isaenergetic personality, so you have to stay Nepal till constitution making process will be keep on. Because there is most nessesaryaperson those who can stimulate the peoples for struggle. This quality belongs to you. Ok haveanice day.
Your lovely brother, Lilimhang Sangbangphe(Chhabi)